मन्त्री बाँस्कोटाको चेतावनी पछि हरेक सिनेमा घरले नेपाली चलचित्र लगाउनै पर्ने — Flash News Bishwa Ghatana
मन्त्री बाँस्कोटाको चेतावनी पछि हरेक सिनेमा घरले नेपाली चलचित्र लगाउनै पर्ने
१७ असार २०७६ काठमाडौँ : चलचित्र क्षेत्रको बिकृती अन्त्य गर्ने उदाश्यका साथ् सरकार अगाडी बढेको भन्दै संचार मन्त्रिले हलवालाहरुलाई चेतावनी सैलिमै भने, ‘अब तपाइहरुको हलमा आधा बर्ष नेपालमै बनेका चलचित्रले ठाउँ पाउनु पर्छ’ । संचार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले त्यति मात्र भनेनन्, ‘उनले ६ महिना आफ्नै देशमा बनेका चलचित्रलाई नचलाउने हलमा ताला लाग्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।’
चलचित्र विकास बोर्डको १९ औं बार्षिकोत्सवमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका मन्त्री बाँँस्कोटाले भने–‘ आज अर्को एउटा विवादको कुरा नगरी भएन । बहसको रुपमा आजबाट सुरुवात भयो । पत्रकार साथीहरु मन्त्रीले बहसको सुरुवात गर्यो भनेर लेखिदिनुहोला । हामी भन्छौ नेपाली कला, संकृती, परपम्परा, नेपालको प्रकृती । तर, यी सबै कुराहरुलाई देखाएर बनाइएका चलचित्रहरु त हलमा नै जान नपाउने रहेछन् ।’
उनले यो बिषयमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नभएकाले अब कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको स्पष्ट पारे । एक बर्षमा ६ महिना आफ्नै देशमा बनेका चलचित्रहरु हलमा दर्शक आए पनि वा नआएपनि चलाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
मन्त्रीले अगाडि भने–‘अब हल मालिकहरु तयार हुनुपर्छ । एक बर्षमा ६ महिना आफ्नो देशका चिजहरु चलेपनि नचलेपनि चलाउनुपर्छ । एउटा सेन्सर बोर्ड भन्ने पनि हुँदो रहेछ । त्यसमा पनि निहु खोजेर झगडा गरिदोरहेछ । हलिउड कि बलिउडको फिल्म त्यहाँ कुन दिन चल्छ, अनी यहाँ त्यसकै झगडा हुनेरहेछ ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले बुधबार बलिउड चलचित्र ‘भारत’ चलाउने बिषयमा भएको विवादलाई घुमाउरो शैलीमा आलोचना गरेका थिए ।
हल संचालकहरुप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने–‘नायिका नराम्री भएपनि हाम्रै देशकी चेली हुन् । नायक नराम्रो भएपनि हाम्रै देशका यूवा हुन् । अन्तको जम्मै राम्रो देख्ने, यहाँको केही पनि नराम्रो नदेख्ने ? आर्दश अरुलाई बनाएर यो क्षेत्रको रक्षा कसरी हुन्छ ?’
उनले प्रस्तावित कानुनको बिषयमा भने–‘अब कानुन नै बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हो । न्यूनतम १८० दिन नेपाली चलचित्र नचलाउने हो भने त्यो हलमा ताला लगाइदिने भन्ने छ । अन्तको हेर्नै पाइदैन भनिएको छैन । ६ महिना मज्जाले विदेशी चलचित्र चलाउनुहोस् न ।’
मन्त्री बाँस्काटोले आजैबाट यो कुरालाई बहसमा ल्याएको स्पष्ट पारे । उनले भने–‘यसमा पनि विवाद झिक्यो नभन्नुहोला । अर्काकोमा मात्र खुशी नबनौ । आफ्नोलाई पनि माया गरौ न । हलवालाले यसको विरोध गर्दै ताला लगाए भने ताला खोलेरै चलाइन्छ ।’
उनले यो बिषयमा आफू चलचित्र क्षेत्रका निर्माता, निर्देशक, छायांकार, प्राविधिक, हल संचालक सबैको कुरा सुन्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । तर, विकासको विपक्षमा कुरा गर्ने भाडतन्त्रको पक्षधरकोहरुको कुरा आफूले नसुन्ने उनको भनाई थियो ।
के १० वर्षमा सम्भव छ ६८ लाख रोजगारी ?
विश्वकप क्रिकेट: सेमीफाइनल पुग्न पाकिस्तानले अब के गर्नुपर्छ ?